Jalqabarratti, guyyaan kun guyyaa guddaadha. Dubbiifi murtoon har’a murteeffame waan kana dura ‘araara’ jedhamee haasa’amaa turerraan adda. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJalqabarratti, guyyaan kun guyyaa guddaadha. Dubbiifi murtoon har’a murteeffame waan kana dura ‘araara’ jedhamee haasa’amaa turerraan adda.
Jalqabarratti, guyyaan kun guyyaa guddaadha. Dubbiifi murtoon har’a murteeffame waan kana dura ‘araara’ jedhamee haasa’amaa turerraan adda. Gamni lachuu waan garaa qabu gadi baafatee dubbateera. Akka kaleessatti walshakkuufi duuba deebi’uun ni jiraata jedhee hin sodaadhu. Abbootiin Gadaa, Haadholiin Siiqqee, Jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni keenya halkanii – guyyaa dhamaatanii, imimmaan dhugaa harcaastanii araara seena – qabeessa kana kan nuuf fiddan galatoomaa! Dubbii qajeelaafi haqa isinirraa dhaalle kana nus dhala keenyaaf akka dabarsinu rabbi nu haa gargaaru! Warri seenaa bade deebisu malee warra seenaa balleessu nu hin taasisiin Waaqni!
Dhaamsi ani qabu;
Deemsi araaraa kun ni jalqabame malee hin xumuramne. Araaricha kan galmaan ga’u koreen nama 71 qabu hundeeffameera. Waan kana booda jiru isaan hojjeta. Nuun maal gochuu qabna seetani?
– Yoo dandeenye afaan keenya sassabbannee, hojii keenya hojjetanna.
– Yoo dadhabne waan jaalalaa, waan tokkummaa, waan Oromummaa, waan araaraa maxxansina.
– ‘Abaluushee koo’ jechuun ammaaf haa dhaabbatu
– Baaltiifi arraba hadhaa’aa kan araara jalqabame gufachiisu hin baaltinu, hin wacnu.
– Wal hin qoodnu, wal hin loognu.
– Yoo oduun afaanitti nu guutee akka taanu wallaalle mana cufannee iyyina.
Ob Hayilee Gabree kanan beeku har’aa miti; bara 1990moota keessaa kaasee ti. Hayyuun kun Hayyuu dha.
Hayyuun kun Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa hundeessuu fi ijaaruu keessatti gahee duraa gumaachaa turan. Kana malees, Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa akka ijaaramuu fi sadarkaa har’aa gahu hayyuu godhee dha.
Hunda caalaa bara 2001 yeroo magaalaan guddoo Oromiyaa akka Adaamaa galu yaadni dhihaate, adda durummaan kan mormee haasaa daqiiqaa 18 dhageessise, goota goota caalu kana ture. Guyyaa sanas dubbii sana nan yaadadha; Adaamaa Galma Bulchiinsa magaalaa keessatti dubbii olaanaa kana dhageessisan; “Fininneen magaalaa Oromiyaa qofaa miti; Finfinneen mallattoo mootummaa Oromiyaa ti; Finfinnee keessaa bahuun mo’amuu fi cabuu Oromoo fi Oromiyaa agarsiisa,” jedhan.
Hayyuun kun sagalee ol fuudhanii morman, garuu sagalee abbootii garaan caalaman…murtiin dabaa sun darbe; dhugaan Oromoo fi dubbiin sun garuu laphee ilmaan Oromoo keessatti akka hapheetti qabatee hafe..Kunoo, injifannoo caaluuf nu kaadhime…GALATOOMAA!
Har’as “Oromoon walcabsuu irraa ana qaladhaa!” jedhe goonni sabaa kun!! Lubbuun kee haa dheeratu, yaa goota koo!!
Bilisummaan, nagaan si waliin haa jiraatu!!
Ani Dhaabasaa dha!!
Obboo HAYILEEn Tokkummaa oromoof yoo feetan anas qalaa jedhee boohee sabas boochise.
ALAMU SIMEE achi keessa taa’ee, sabarratti kolfaa…….
#Ethiopia:A committee of 71 people from d/t background was formed today at the Abba Gada Council’s peace conference after Dawud Ibssa, chairman of OLF-SG,promised to let the Abba Gada council take over & deal with OLF’s armed members & issues related to their possible disarmament pic.twitter.com/hSoeW3lOid
Cntd: demobilization & reintegration. The committee is comprised of 3 members from ODP, 3 from OLF-SG, 54 from the Abba Gada Council, & 11 from various section of the #Oromo community, including women and elders. Dawud said that he wanted the Abba Gadasa to oversee the process. pic.twitter.com/abnbhDgv7B
“Aha!, Si dura anaan haa ajjeesu!!
Jaal Daawud, saba Oromoof urtuu ABBOOtii GADAA fi Ummata Oromootti kennan!
Eehee, namni ni darba; sabni garuu jiraataa dha; aangoon ni darba; seenaan aangoo garuu jiraataa dha.
Yeroo dhiphuu kanatti furtuun argamuun murteessaa ture; Gadaan furtuu of harkaa dhabe malee furtuun eessa akka jiru hubateera; Siinqeen furtuu of harkaa dhabde malee, eessa akka jirtu hubatteetti. Furtuun taa’anii marii gaggeessuu dha!
Marii Araaraa har’aa irratti malalttoon argameera.
Jaal Daawud ummata umurii ijoollummaa isaa itti wareegeef hin qaanessine; ofii dhabee ummaticha boonse! ummatichaa fi aadaa Oromoo akka deebi’ee latuuf wareegama itti baase kabajee, ka’ee dhaabbatee, dhugaa jirtu ummataafis seenaafis dubbatee, Gadaa fi ummata Oromootti ilmaan guddise dabarsee kenne! Aha!, Si dura anaan haa ajjeesu!!
Jaal Daawud, abbaa keenya, qabsaa’aa murannoo fi obsa nu barsiifte, hamtuun si hin argatiin; umurii dheeraa siif aha kennu; ulfinaa fi kabajaan waari!
Jaal DAawud, WBO ittisa ummataaf ijaartanii, leenjiftanii Oromiyaan geessan ummataa fi Abbootii Gadaatti dabarsitan…kana gaafa Asmaraa galle, Fulbaana 15, Handhuura Oromiyaa, Finfinnee, waltajjii Masqalaatti akkuma himtan, ammaan booda, qabsoon kan ummataa, ABOn kan ummataa, WBOn kan ummataa ta’uu irra deebitanii dhugoomsitan; Gadaan kun kan Malbaa ti; Gadaa Malbaa keessatti Daawud seenaa haaromse; mo’amnee illee akka moonu, xurree nuuf baaftan!! Xurree Malbaa!! Galatoomaa!
Mo’amnee illee ni moona!
Anaani, Baqqee koo! Kan si dhiphise maal akka ta’e, ifaa dha! Mataan keenya gad hincabu! Mo’amnee illee ni moona!Saba keenayaf waan hin taane hin jiru; isin hin qaanessinu! Nuti sabaaf kaane, waan sabni jedhe waan hin taaneef hin qabnu!
Dhiphuun kee, dhiphuu keenya! Waaqayyoo dhiphuu keessaa nu baasa!
Ilfee koo! Kun Imimmaan Malbaa ti; kan ceesisu malee kan nu cabsu miti!!